စိတ်ကြိုက် USB ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းစက်၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board > USB ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းစက်
၁။ ၅-port USB charger Parameters
2) Considering its durability, theဆားကစ်ဘုတ် shall purchase qualified brand supply components, carry out aging and testing for 720 hours without interruption, and repeatedly verify its durability. Theဆားကစ်ဘုတ် shall be equipped with automatic fuse box, high-voltage or short-circuit automatic protection, and automatically restore theဆားကစ်ဘုတ် after safety.
၃ ။ Charger အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
၅ ။ ထုပ်ပိုး
3) Prices are laddered according to the quantity of the printedဆားကစ်ဘုတ်.
၁) ငွေပေးချေခြင်း နည်းလမ်း - ကြိုတင်ပေးငွေ ၃၀%၊ တင်ပို့ပြီးနောက်ငွေလက်ကျန်။
8. Introduction toဆားကစ်ဘုတ် services:
Hot Tags: USB ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းစက်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ